Shirkii ka socday Muqdisho oo u dhaxeeya hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya oo heshiis la’aan ku dhamaaday - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShirkii ka socday Muqdisho oo u dhaxeeya hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya oo heshiis la’aan ku dhamaaday
September 11, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Shirka madasha hoggaamiyaasha Soomaaliya oo maanta oo Axad ah la isku fahmi waayay.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shirkii ka socday Muqdisho oo u dhaxeeyay hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya ayaa ku dhamadaay heshiis la’aan maanta oo Axad ah.
Sida ay sheegayaan wararka, madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa isaga baxay shirka kadib markii madaxweynaha Soomaaliya oo wakhtigiisa dhamaaday Xasan Shiikh Maxamuud uu soo jeediyay in dhismaha aqalka sare meesha laga saaro.
Wixii warar ah oo soo kordha dib baan idiin kasoo gudbin doonaa.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasaaradda batroolka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay soo bandhigi doonto macluumaadka shidaalka xirmooyin badda ah. Wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed oo maanta wareysi siiyay idaacada BBC qeybta Af-Soomaaliga ayaa sheegay in bisha December [...]